Cuqaasha Ceegaag oo shirjaraa’id oo ay kaga hadlayaan xalinta Dilkii Maxamuud Jamali iyo Maxamed Quule loogu gaystay Oog meesha uu marayo saxaafada usoo bandhigay iyaga oo dhinaca kale ka jawaabay codsi uga yimid salaadiinta Oog iyo kuwa beelwaynta Isaaq |
Dilkii November 02, 2012 abaarihii 3:00 habeenimo loogu gaystay Tuulada Oog Maxamuud Jamali iyo Maxamed Quule oo ay salaadiinta deegaanku siiba kuwa dhibka gaystay in badan saxaafada kusoo bandhigeen meesha hawli u marayso iyaga oo waliba kasoo saaray warar is burinaya ayaa waxa ay lagama maarmaan noqon wayday in dadka ay arintani khusayso loo sheego meesha ay taagan yihiin dadka reeg Ceegaag oo ah dadka ay ka dhasheen labadii dhibane ee dilkii ula kaca ahaa loogu gaystay Oog.
Warkan horay ayaanu shabakada uga sii daynay akhriso si aad dhacdadan u yara xasuusato ‘Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Oog ayaa sheegaya in si ula kaca loogu dilay magaalada Oog Maxamuud Xuseen Xaaji Cali iyo Maxamed Ismaaciil Cali Abokor. Wararka ayaa sheegaya nin kasoo jeeda deegaanka Oog uu si badheedh ah ugu toogtay iyaga oo fadhiya Hodheel ay ka dalbadeen Raashin. Wixii war ah ee ka soo kordha dhacdada DILKAN kala soco saacadaha soo socda Ceegaag.com.
Hadaba nala dhagayso Cuqaasha reer Ceegaag meesha ay ka taagan yihiin dhacdadan iyaga oo markii u horaysay saxaafada u yeedhay.